ဒုလ္လဘဟူသည် — Steemit
ဒုလ္လဘဟုဆိုလျှင် အချို့က ခဏဝတ်သော ရဟန်း၊ သာမဏေများကိုသာ ဆိုသည်ဟု အထင်ရောက်တတ်ကြ၏။
အမှန်အားဖြင့် ဒုလ္လဘဟူသည် ရခဲခြင်း၊ ခက်ခက်ခဲခဲ ရရှိခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ ခဲခဲရင်းရင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ရရှိသည့် ဘဝဖြစ်သဖြင့် ရဟန်းဘဝ ရောက်ရှိလာကြသည့် သူများကို ဒုလ္လဘဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ထိုသို့ခက်ခဲစွာရရှိလာသည့် ရဟန်းဘဝ အနှစ်သာရပျောက်ကာ အချို့သော ခဏဝတ် ရဟန်းသာမဏေများသည် သာသနာဘောင်တွင် သင်္ကန်းဝတ်၍ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေသည့် သဘောဖြစ်နေသည်ကို စိတ်မကောင်းဖွယ် တွေ့ရှိရ၏။ မနက်ပိုင်းသိမ်ဝင် ညနေပိုင်း လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ ညစာစား၊ ဝိနည်းသိက္ခာကို ထင်သလို ကစားနေကြသလို ဖြစ်နေကြ၏။ အချို့သော ဒုလ္လဘများသည် ရဟန်းဝတ်သည်မှာ (၇)ရက်ခန့်သာရှိ၏။ ပြန်ထွက်သွားသည့်အခါ အာပတ်များကား မရေမတွက်နိုင်အောင် ယူသွားသလို ဖြစ်နေကြ၏။
အချို့ကျောင်းများကလည်း ခဏနေတာပဲဟုဆိုကာ သိပ်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြောဆိုဆုံးမခြင်း မရှိကြသဖြင့်လည်း ခဏဝတ် ဒုလ္လဘရဟန်း၊ သာမဏေအချို့သည် သာသနာတော်အပေါ် အလွယ်ရ၊ အလွယ်ထား၊ အဓိပ္ပါယ်လေးနက်မှု ရှားသွားကြ၏။ အလိုလိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် လွယ်လွယ်ဝတ်၊ လွယ်လွယ်နေ၊ လွယ်လွယ်ထွက်သွားသူများကပင် ထိုကျောင်းနှင့်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များအပေါ် အပြင်လောကတွင် အပြစ်များပင် ပြန်ဖော်လေ့ ရှိတတ်ကြ၏။ နေချင်သလို နေခွင့်ပေးလိုက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် သာသနာတော်၏ တန်ဘိုးကို မထားတတ်သူများ၊ သာသနာတော်ကို အထင်သေးသူများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းပင် ဖြစ်၏။
ဤကိစ္စသည် လက်ခံဝတ်ပေးသည့် ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်နှင့် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော်များ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုအပေါ် မူတည်နေသည်ဟု ထင်မြင်မိ၏။ မည်မျှပင် မျက်နှာကြီးမျိုး၊ ဂုဏ်ရှိသူမျိုး၊ ငွေရှိသူမျိုးပင် ဖြစ်ပါစေ သာသနာ့ဘောင် ဝင်လာသည့်အခိုက်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေစေမည့်အစား ကျင့်သင့်ကျင့်ထိုက်သည်များ၊ ပွားသင့်ပွားထိုက်သည်များကို စနစ်တကျ သင်ပေးသင့်လှ၏။ မလိုက်နာနိုင်၊ မကျင့်နိုင်ခြင်းသည် ထိုဒုလ္လဘ၏ သဒ္ဓါ၊ ဝိရီယပေါ်မှာသာ မူတည်၏။ သာသနာတွင် အလွယ်နေလို့မရ၊ သာသနာတွင်း ရဟန်းဘဝသည် ခက်ခဲလှသည့် သဘောသဘာဝကို ခဏဝတ်ရဟန်းသာမဏေများ သိရှိသွားမှသာ သာသနာတော်၏တန်ဘိုး၊ ရဟန်းဘဝ၏တန်ဘိုး၊ ကျောင်းတိုက်၏တန်ဘိုး၊ ဆရာတော် သံဃာတော်များ၏ တန်ဘိုးလည်း ရှိနေမည် ဖြစ်၏။ အားနာလို့ လွတ်လပ်စွာ နေခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းသည် ခဏအခိုက်အတန့် ကျေနပ်သွားဖွယ်ရှိသော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါ အပြစ်များသာ ပြောဆိုကြဖွယ် ရှိနေပေ၏။ တန်ဘိုးသိမှ တန်ဘိုးရှိဟုဆိုသကဲ့သို့ ဒုလ္လဘတန်ဘိုးကိုသိ၍ ထိုတန်ဘိုးကို ရရှိအောင် အသုံးချနိုင်မှသာလျှင် အမှန်စင်စစ် ဒုလ္လဘဖြစ်သည်ကို သိရှိစေရန် လိုအပ်လှပေ၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ တဒင်္ဂဝတ်ကြသည့် ရဟန်းသာမဏေများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရခဲလှသည့် ရဟန်းဘဝ နေရသည့်အခိုက်အတန့်တွင် ဝိနည်းကျင့်ဝတ်ကိုအလေးထား၊ ကုသိုလ်တရား တိုးပွားအောင် ကြိုးစားရင်း “ယောင်တစ်လုံးအဆုံးခံပြီး ရင်းစားပင် ပြန်မရသည့် ဒုလ္လဘမျိုး” မဖြစ်ရအောင် မိမိကိုယ်မိမိ အသိသတိဖြင့် အဓိပ္ပါယ်အနှစ်သာရရှိသည့် ဒုလ္လဘမျိုးဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားနေထိုင်ကြရမည်သာ ဖြစ်ပါပေ၏။
ပထမဆုံး ရဟန်းခံပြီး သိမ်ထွက်လောင်းလှုတဲ့ကိစ္စဗဟုသုတအဖြစ်ပြောမယ်။
❖ ရဟန်းအသစ်တွေကိုသိမ်ထွက်ရင် အရင်ဆုံးသိမ်ကထွက်စေတာက ခုမှဖြစ်တဲ့ရဟန်းဟာ အာပတ်အားလုံးက စင်ကြယ်နေလို့ပဲ။
အာပတ်ဆိုတာ အပြစ်သင့်ရောက်ခြင်းလို့ပြောတာ။ တခြားသံဃာတွေက အာပတ်အနည်းနဲအများရှိနေနိုင်တယ်လေ။
❖ လူတွေကလည်း သီလသန့်ရှင်းနေတဲ့ရဟန်းသစ်လေးကို ဦးဦးဖျားဖျားလှုချင်ကြလို့ သိမ်ကအထွက် စောင့်လှုကြတာပေါ့။
❖ ဒီမှာပြောစရာရှိလာတယ်။ တစ်ခါမှမဝတ်ဖူးတဲ့ရဟန်းဆိုရင် အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ရဟန်းအကြိမ်ကြိမ်ဝတ်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင် ပြောစရာရှိလာတယ်။
❖ ရဟန်းတွေမှာ ကြီးလေးတဲ့အာပတ်(ဂရုက)ဆိုတာရှိတယ်။
❖ ပါရာဇိကကျပြီးတဲ့ရဟန်းကတော့ ဘယ်တော့မှရဟန်းပြန်ဝတ်လို့မရတော့ဘူး။ သံဃဒိသသ်အာပတ်ကတော့ ရဟန်းမဖြစ်တော့မဆုံးရှုံးဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီအာပတ်ကလည်း ကျန်တဲ့သေးငယ်တဲ့အာပတ်တွေလို ရိုးရိုးဒေသနာကြားလို့ အာပတ်အပြစ်မကျေဘူး။ သိမ်ဝင်ပြီးဉာတ်ကမ္မဝါနဲ့ အဆင့်ဆင့်ချေမှကျေတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ သံဃာ ၂၀ ကျော်နဲ့မှရတယ်။
❖ သံဃဒိသသ်အာပတ် ၁၃ ပါးရှိတယ်။ ❖
━ ၁။ ။လုံ့လပြု၍သုတ်လွှတ်မှု၊
━ ၂။ ။မာတုကာမနှင့်ကိုယ်လက်နှီးနှောမှု၊
━ ၃။ ။မာတုကာမကိုညစ်ညမ်းစကားပြောဆိုမှု၊
━ ၄။ ။မေထုန်အလှုခံမှု၊
━ ၅။ ။အောင်သွယ်မှု၊
━ ၆။ ။အင်္ဂတေအချောကိုင်ကျောင်းဆောက်မှု၊
━ ၇။ ။ကျောင်းဆောက်လို၍သစ်ပင်ခတ်မှု၊
━ ၈။ ။ရဟန်းကိုပါရာဇိကဖြင့်စွပ်စွဲမှု၊
━ ၉။ ။ဒုတိယပါရာဇိကဖြင့်စွပ်စွဲမှု၊
━ ၁၀။ ။သံဃာသင်းခွဲမှု၊
━ ၁၁။ ။သံဃာသင်းခွဲမှု့ကိုအားပေးမှု၊
━ ၁၂။ ။ရဟန်းဆိုဆုံးမမှု့ကိုမနာခံမှု၊
━ ၁၃။ ။လူတို့၏သဒ္ဓာတရားကိုဖျက်စီးမူ ။
❖ ဒါအကျဉ်းပြောတာ အကျယ်သိချင်ရင် ဝိနည်းစာအုပ်ဖတ်ပါ။ ဒုလ္လဘတွေကိုပြောလိုတာက
အာပတ် ၁ ၊ ၂ ၊၃ ၊၄ ၊၅ တို့ဟာသင့်လွယ်တယ်။
❖ ကိုယ့်ဇနီးကိုငါမိန်းမပဲလေဆိုပြီး လက်ကိုင်ပြီးစကာပြောမယ်၊ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေပြောမယ်ဆိုရင် ဒီအာပတ်သင့်ပြီ။ တစ်ချို့ကိုယ်တော်လေးတွေ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မြင်ရင်ဘာကောင်းတယ် ညာကောင်းတယ်ဆိုပြီး အောက်ပိုင်းစကားလုံးတွေနဲ့စတတ်ကြတယ် အဲဒီမိန်းကလေးကနားလည်ရင် ဒီအာပတ်သင့်ပြီ။
❖ ဒုလ္လဘတွေဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီအာပတ်သင့်ရင် မဂ်ဖိုလ်မရတော့ဘူး။ ပြီးတော့အာပတ်တန်းလန်းနဲ့ လူထွက်သွားရင်ရပေမဲ့ နောင်တစ်ခါရဟန်းပြန်ဝတ်ရင် ဒီအာပတ်ကအလိုလိုပြန်သင့်နေတယ်။ အာပတ်ကချေကိုချေခဲ့မှရတာ။
❖ ဒီတော့ အကြိမ်ကြိမ်ဝတ်တဲ့ ဒုလ္လဘတွေ မိမိမှာဒီအာပတ်ကြီးအရင်ကသင့်ခဲ့ရင် အခုပြန်ဝတ်တဲ့အခါသိမ်ထဲမှာ ကမ္မဝါဆုံးတာနဲ့ ဒီအာပတ်ကသင့်နေပြီ။ဒီတော့သိမ်က သီလဖြူစင်သူအဖြစ်အရင်ထွက်တာ ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲ။ သတိထားကြပါ။
❖ နောက်တစ်ခု ကုသိုလ်ကိစ္စမှာ အကုသိုလ်လာရောတာပဲ။ ဒုလ္လဘ၀တ်တယ်ဆိုတာ မြင့်မြတ်တဲ့သီလကုသိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ၀တ်ကြတာ။
ဒုလ္လဘဆိုတာ"ဒု = ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ။
လာဘ = ရရှိတာ"။
❖ ဒီတော့ နေတဲ့အချိန်မှသီလကို အတတ်နိုင်ဆုံးစောင့်ရှောက်ရသလို၊ ၀တ်လာရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဟာလည်း မြင့်မြတ်နေရမယ်။
❖ ကိုးန၀င်းကျေအောင် ကိုးရက်တို့၊ ဆယ့်တစ်မီးငြိမ်းအောင် ဆယ့်တစ်ရက်တို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။
အချို့မိဘတွေ။ သားသမီးက ရှင်၊ရဟန်း ၀တ်နဲ့ပျော်မွေ့နေချိန်မှာ ခုလိုကိုးန၀င်းတွေ၊ ဆယ့်တစ်မီးအယူဆတွေကြောင့် အတင်းလူထွက်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ရက်စုံဂဏန်း မ၀တ်ကောင်းဘူးလို့လဲပြောကြပြန်တယ်။
❖ အလုပ်အကိုင်၊ ကျောင်းတက်စရာရှိလို့ လူထွက်ခိုင်းတာမပြောသာပေမဲ့ ခုလိုအယူမှားတွေကြောင့် လူထွက်ခိုင်းတာဆိုရင်တော့ အတော်အကုသိုလ်ကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်။
credit - အရှင်ပညာသီရိ(ရမ္မာကျွန်း)
★ /\_ သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ၊ /\_ ★
သင်္ကြန်တွင်း ဒုလ္လဘဝတ်မည့်သူများအတွက်ပြန်လည်share ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawthu from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.